कालो टी आकार 55 55 इन्च टच कन्ट्रोल रनिंग बोर्ड लाइट गेमि Desk डेस्क, कालो आर्मोरचिन गेमि desk डेस्क, गेमि chair कुर्सी, सिट स्ट्यान्ड डेस्क, पीसी गेमिंग डेस्क निर्माताहरू र कारखानाहरूको साथ-मूल्य सूची-चीन Foshan Qiangshou हार्डवेयर निर्माण कं, लिमिटेड।
Z- आकार Gamig डेस्क
Z-shaped 31१. inch इन्च गेमि Desk डेस्क
Z- आकार 39 inch इन्च गेमि Desk डेस्क
Z- आकार 47 47 इन्च गेमि Desk डेस्क
Z- आकार 55 55 इन्च गेमि Desk डेस्क
R- आकार Gamig डेस्क
R-shaped .5१. inch इन्च गेमि Desk डेस्क
आर-आकार 39 inch इन्च गेमि Desk डेस्क
आर-आकार 47 47 इन्च गेमि Desk डेस्क
आर-आकार 55 55 इन्च गेमि Desk डेस्क
T- आकार Gamig डेस्क
T-shaped .5१. inch इन्च गेमि Desk डेस्क
T-Shaped39 इन्च गेमि Desk डेस्क
T-shaped inch 47 इन्च गेमि Desk डेस्क
T-shaped inch inch इन्च गेमि Desk डेस्क
X- आकार Gamig डेस्क
X- आकार 31१. inch इन्च गेमि Desk डेस्क
X- आकार 39 inch इन्च गेमि Desk डेस्क
X- आकार 47 47 इन्च गेमि Desk डेस्क
X- आकार 55 55 इन्च गेमि Desk डेस्क
घर > उत्पादनहरू > T- आकार Gamig डेस्क > T-shaped inch inch इन्च गेमि Desk डेस्क > कालो टी आकारको 55 55 इन्च टच कन्ट्रोल चलिरहेको बोर्ड लाइट गेमिaming डेस्क, कालो आर्मरको साथ
रातो X- आकार 55 55 इन्च टच कन्ट्रोल चलिरहेको बोर्ड लाईट गेमिaming डेस्क, कालो आर्मरको साथ
ब्ल्याक एक्स-आकारको inch 47 इन्च गेमि Desk डेस्क, बिना लाईट
रातो टी आकारको 55 55 इन्च टच कन्ट्रोल चलिरहेको बोर्ड लाइट गेमि Desk डेस्क
कालो टी आकार 55 55 इन्च रिमोट कन्ट्रोल आरजीबी कालो आर्मरको साथ लाइट गेमि Desk डेस्क
रातो R- आकार 55 55 इन्च रिमोट कन्ट्रोल RGB LED लाइट गेमि Desk डेस्क, कालो आर्मरको साथ
कालो टी आकारको 55 55 इन्च टच कन्ट्रोल चलिरहेको बोर्ड लाइट गेमिaming डेस्क, कालो आर्मरको साथ
यो गेम्स डेस्क तपाईलाई राम्रो गेमिंग अनुभव लिन मद्दत पुर्‍याउन धेरै सुविधाहरूसहित आउँदछ। हामी धेरै वर्षदेखि गेमिंग डेस्कमा केन्द्रित छौं, पेशेवर प्रोसेसिंग र अनुकूलन सेवा। हामीसँग नयाँ उत्पादन डिजाइन गर्न ग्राहकलाई OEM र ODM उत्पादनहरू प्रदान गर्न एक व्यावसायिक विकास टोली छ।
· Ã AR LARGE GAMING SURFACEã € ‘
ठूलो गेमि Sur सतहï¼Œ गेमि computer कम्प्युटर डेस्कसँग उदार खेल सतह छ जुन प्रो गेमरहरूको लागि उत्तम छ। कार्बनफिबर डेस्कटप दाग र स्क्र्याच प्रतिरोधी, र सफा गर्न को लागी सजीलो छ। कन्टुरेट टेबल शीर्षले तपाईंलाई नजिकै बस्न अनुमति दिन्छ र तपाईंको मनलाई र फोरहोरहरू समर्थन गर्दछ। गेमि surface सतह मापदण्ड â€â € चौडाई २.6..6२â € मा चौडा हुन्छ, कन्ट्रोलर स्ट्यान्ड तपाईसँग अब उत्तम प्रतिस्पर्धालाई नष्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा छ।
· Ã € सरल T-आकारको खुट्टाहरू € '
वर्ग समर्थन टुक्रा मा टी-खुट्टाहरू affix, डेस्कटप मुनि, लेग कोठा अवरोध गर्न केन्द्र समर्थन टुक्रा बिना स्थिरता प्रदान गर्न।
· Ã € कालो आर्मर र डाईनामिक टच नियन्त्रण आरजीबी एलईडी लाइट ã ‘
कालो आर्मरले बिभिन्न शैली देखाउँदछ, एकल टेबल स्ट्यान्डको साथ, तपाईं सबै भन्दा राम्रो डिजाइनर हुनुहुन्छ। छेउ आर्मरमा आरजीबी एलईडी बत्तीहरू छन्, केवल तपाईंको औंलाले स्विच छुनुहोस्, रिमोट कन्ट्रोल बिना। तपाईंको मनपर्ने र color्ग वा गतिशील आरजीबी बहु-रंग छान्नुहोस्। प्रकाश कार्यक्रम LED RGB प्रकाशले उर्जा स्रोतको रूपमा USB जडान प्रयोग गर्दछ। पहिले कहिल्यै नहेर्ने तपाईंको खेलको अनुभव लिनुहोस्!
AM ã G फिचरहरू गेमरका लागि निर्माण हुन्छन् € '
यो गेम्स डेस्क तपाईंलाई राम्रो खेल अनुभवको लागि मद्दत गर्न धेरै थप सुविधाहरूको साथ आउँदछ। यो पीसी गेमिंग डेस्क एक सुविधाजनक कप होल्डर, हेडफोन हुक, तपाईंको गेमि keyboard किबोर्ड र माउसको लागि एक अतिरिक्त-ठूलो माउस प्याडको साथ आउँदछ।
· Ã € ग्राहक समाधान ã '
हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहान्छौं कि हामी बजारमा सब भन्दा राम्रो गेम्स डेस्क डिजाइन र निर्माण गर्दैछौं। हामी आफ्नै कारखानामा सबै चीज बनाउँछौं। हामी हाम्रो नवीन डिजाइन, कठोर परीक्षण, र हाम्रो विश्व स्तरीय निर्माण प्रक्रियामा गर्व गर्छौं। हामी हाम्रा उत्पादनहरूलाई उच्च स्तरमा समात्छौं र आशा गर्दछौं कि तपाईं हाम्रो गेम्स डेस्क प्रयोग गरेर उत्कृष्ट अनुभव पाउनुहुनेछ।
Q1: म कसरी मूल्य प्राप्त गर्न सक्छु?
A: हामीसंग समर्पित बिक्री र सम्पर्क स्टाफ छ जो तपाईको सेवामा दिनको २ 24 घण्टा हुनेछ। तपाईं हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ, व्हाट्सएप, फेसबुक, वा हामीलाई सम्पर्क गर्न अन्य तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंलाई मूल्यहरू प्रदान गर्न सक्दछौं।
Q2: के म नमूनाहरू किन्न सक्छु?
उत्तर: हो, तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ शुल्कको लागि नमूना प्राप्त गर्नका लागि।
Q3: तपाईंको नेतृत्वको समय कति हो?
A: यो अर्डरहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, -० फिट कन्टेनरको लागि उत्पादन चक्र १ 15 दिनको हुन्छ।
Q4: तपाइँको भुक्तानी सर्तहरु के हो?
A: TT, एक टच, L / C वा अन्य भुक्तानी विधिहरू। एक अर्डर राख्नु अघि कृपया हामीसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
Q5: रसीद पछि सामान बिग्रेको छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
A: तपाइँले प्रासंगिक वैध प्रमाणपत्र प्रदान गर्न आवश्यक छ, र हामी तपाइँलाई अर्को अर्डरमा उही उत्पादनहरू पठाउनेछौं।
Q6: हाम्रो सेवा के हो?
A: हामीसँग नयाँ उत्पादनहरू डिजाइन गर्न ग्राहकलाई OEM र ODM उत्पादनहरू प्रदान गर्न एक व्यावसायिक विकास टोली छ। हामी तपाईंलाई सामूहिक उत्पादनको बखत सबै विवरणहरू प्रदान गर्नेछौं, राम्रो गुणस्तरको व्यवस्थापन र अर्डर फलो-अप सेवाहरू छन्, र कारखानामा भ्रमण र निरीक्षण निरीक्षण गर्नका लागि स्वागत छ।
Q7: किन आफ्नो कम्पनी छनौट?
A: हामी एक हार्डवेयर फर्नीचर उत्पादक हो जुन २० बर्ष भन्दा बढिको अनुभवको साथ छ। किनकि हामी धातुको फर्नीचरको एक पेशेवर निर्माता हो, गुणवत्ता र मूल्य धेरै प्रतिस्पर्धी हो।
Q8: तपाईं कसरी हाम्रो व्यापार दीर्घकालीन र राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुहुन्छ?
A: हामी हाम्रो ग्राहकहरूको लाभ सुनिश्चित गर्न राम्रो गुण र प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूको ग्यारेन्टी दिन्छौं। तपाईंको अनुरोध र उजूरी यहाँ सम्मान गरिनेछ, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ कुनै फरक पर्दैन।
हट ट्यागहरू: गेमि desk डेस्क, कालो टी आकारको inch 55 इन्च टच कन्ट्रोल रनिंग बोर्ड लाइट गेमि Desk डेस्क, कालो आर्मोर गेमि chair कुर्सी, सिट स्ट्यान्ड डेस्क, पीसी गेमिंग डेस्क, निर्माता, कारखाना, चीन, मूल्य सूची
रातो टी आकार 55 55 इन्च रिमोट कन्ट्रोल आरजीबी कालो आर्मरको साथ लाइट गेमिaming डेस्क
रातो टी आकारको inch 55 इन्च गेमि Desk डेस्क, बिना लाईट
कालो टी आकार 55 55 इन्च टच कन्ट्रोल चलिरहेको बोर्ड लाइट गेमिaming डेस्क डेस्क रातो आर्मरको साथ
कालो टी आकार 55 55 इन्च रिमोट कन्ट्रोल आरजीबी रातो आर्मरको साथ लाइट गेमि Desk डेस्क
: शqi्गकी औद्योगिक क्षेत्र, नानजुआang टाउन, चान्चेng जिल्ला, फोशन शहर, गुआंग्डोंग प्रान्त, चीन
हाम्रो उत्पादनहरू वा मूल्य सूचीको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया तपाईंको ईमेल हामीलाई दिनुहोस् र हामी २ 24 घण्टा भित्र तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं। गेमि desk डेस्क, गेमि chair कुर्सी, सिट स्ट्यान्ड डेस्क, पीसी गेमि desk डेस्कसँग सब भन्दा कम मूल्य छ तर राम्रो गुण।
© प्रतिलिपि अधिकार २०२०-२०१२ चीन Foshan Qiangshou हार्डवेयर निर्माण कं, लिमिटेड।